Global Voices teny Malagasy » Ny toetry ny fikatrohana Kiorda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jolay 2018 3:00 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràka, Iràna, Syria, Tiorkia, Fahalalahàna miteny, Foko sy Fiaviana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana jolay taona 2007)
Mety ho gaga ny sasany mandre fa mipoitra ato amin'ny Global voices maharitra ela tsy tahaka ny ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Tiorka ny fitantarana ny tontolon'ny bilaogy Kiorda. Na dia nivoatra aza ny tontolon'ny bilaogy Tiorka, manjavona tsikelikely ny tontolon'ny bilaogy Kiorda (farafaharatsiny tapitra ny teny Anglisy). Ny lahatsoratra androany dia hifantoka amin'ny toetry ny fikatrohana Kiorda ankehitriny (satria mety azo sokajiana ho singa voalohany amin'izany ny fibilaogina) sy hifantoka amin'ny tetikasa vaovao natao hanampiana ny fivoaran'ny feo Kiorda.
Sarotra hazavaina ny fihemoran'ny feo Kiorda, saingy mety noho ny tranonkala Kiorda tafihan'ny mpijirika isan-karazany no antony lehibe amin'ny fihenan'ny fibilaogina. Voajiriky ny olona miantso ny tenany fa “matoatoa mampidi-doza ne mutlu turkum diyene” i IraqiKurdistan . Ary raha tsy afaka manamafy aho dia miahiahy fa namadika ny bilaoginy ho an'ireo mpamaky nasaina ihany ny From Holland to Kurdistan  noho ny antony mitovy amin'izany ihany, satria nanana olana tamin'ireo mpijirika ny tranonkalany (sy ny tranonkalam-baovao amin'ny teny Holandey). Tsy ny mpijirika ihany no mampidi-doza ho an'ny fibilaogina Kiorda fa eo koa ny governemanta izay miasa ivelany ireo mpanoratra ao aminy. Ny tranonkalam-baovao The Arab Network for Kurdish Rights  dia fikambanana vaovao mikasa hiaro ny feo kiorda antserasera. Eo am-panaovana fanangonan-tsonia izy ireo, izay tokony ho vonona amin'ny faran'ny volana. Mandrapaha-tonga izany, ity sombiny kely tamin'ny lahatsora-panokafan-dry zareo :
Ny Kurdish Rights (Zon'ny Kiorda) dia tetikasan'ireo mpianatra mahaleotena izay maniry hiady ho amin'ny zo Kiorda ao anatin'ny Afovoany Atsinanana. Ao amin'ity tranonkala ity, mikendry hampahery ireo bilaogera Kiorda sy ireo mpandrindra izahay mba hanohy hanoratra na dia eo aza ny zava-misy fa nakaton'ireo firenena Afovoany Atsinanana, ao Iran,Torkia, Bahrain sy Syria, sy ny sisa hafa ireo bilaogy sy tranonkala Kiorda marobe. Amin'ny fomba mahazatra, tsy navela hiloa-bava ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra ao anatin'ny faritra ireo Kiorda. Ankehitriny, mitsangana isika amin'ny maha-mpianatra antsika sy tanora mpikatroka mba hilaza hoe “ampy izay”!”
Noho ny teknolojia vaovao, lasa mora kokoa hatrany ho antsika ny mandre ny feon'ireo tsy nomena feo nandritra ny tantarantsika, ary TSY avelantsika esorina amin'ireo bilaogera Kiorda namana sy mpanoratra antserasera izany fitaovana mahery vaika izany.
Ny fanambarana ny iraka ampanaovina ny tranonkala Hevallo  dia miresaka ny tsy fisian'ny feo Kiorda ao amin'ny tranonkala:
Manafintohina indraindray rehefa tonga avo ny ady psikolojika sy ny fanamelohana ny tolona Kiorda ao Torkia, fa tsy marobe ireo tranonkala/bilaogy amin'ny teny Anglisy, izay manome vaovao farany avy amin'ny fomba fijery Kiorda ary manohitra ny mari-pamantarana ‘ mpampihorohoro “sy ‘mpampatahotra’ izay toa mora eken'ireo governemanta tandrefana. Miezaka manao izany i Hevallo.
Ary mazava ho azy, voalaza imbetsaka ao amin'ity takelaka ity ny tranonkala SaveRojTV  izay miasa am-pavitrihana ho an'ny fiarovana ny zon'ny fampielezam-peo Kiorda.
Amin'ny olan'ny fikatrohana Kiorda, nahatonga ireo Kiorda ao amin'ny Kiordistan Tiorka ho ao anatin'ny alahelo lalina ny fahafatesan'ilay mpikatroka Kiorda fanta-daza, Orhan Dogan . Samy nanambara ny fahafatesana sy ny vaovao tamin'ny fandevenana  i Rasti  sy Hevallo .
Tiako ny hamarana ny lahatsoratra androany amin'ny sombiny kely tamin'ny tatitra mahafinaritra izay nataon'i Zaneti  momba an'i Leyla Zana, mpikatroka Kiorda hafa sy mpiara-dia amin'i Orhan Dogan, :
Eo amin'ny faritra rehetra manerana an'izao tontolo izao dia misy olona be herim-po izay miaina ny fiainany amin'ny fahavononana hanao ny zavatra tsara ho an'ny tenany sy ho an'ireo manodidina azy. Ireo no olona ankasitrahana amin'ny asany. Tsy mahazo fankatoavana ara-potoana velively izy ireo fa [noho] ny fanantenana marina fa ho ankasitrahana noho ny finiavana tsara ao aminy ry zareo. Ao amin'ny faritra be Kiorda ao Torkia (Kiordistan Avaratra), niaina tolona maharitra i Leyla Zana, tapa-kevitra ny hanatratra ny zon'ny vahoakany sy hitady demokrasia eo amin'ny toerana iray izay toa tsy ho tanteraka mihitsy ny hevitra tahaka izany. Mety misy mahita izany ho esoeso fa voampanga noho ny fisintahana sy ny fankahalàna izy raha momba ny fandriampahalemana sy ny demokrasia ihany no resahany. Na dia izany aza, tsy esoeso izany fa ny tsy fahampian'ny demokrasia ao amin'ny toerana onenany no miteraka fankahalana amin'ny toe-javatra izay voatery hiezaka hitady fandriampahalemana sy voasazy noho izany ny olona tahaka azy .
Any Torkia, iharan'ny fampihorohoroana sy fampijaliana feno habibiana sy ny politikan'ny [fanovana mari-panondroana] an-katerena ny Kiorda. Misy ao amin'ny Kiorda izay rehetra tsy fitoviana ara-tsosialy sy ara-politika ary tratra aoriana ara-toekarena ny faritra onenan'izy ireo. Na dia nilaza aza ny ankamaroan'izao tontolo izao fa misolotena ny demaokrasia ao Afovoany Atsinanana ny firenena, dia azo lazaina mora foana fa lavitry ny marina izany. Nosaziana ireo Kiorda nitabataba fisian'ny tsy rariny, nosokajiana ho mandrahona ny fanjakana Tiorka, ary nogadraina. Ny tantaran'i Leyla Zana dia ohatra ho an'ireo izay niezaka nitondra ny lalan'ny fandriampahalemana ary nomelohina noho ny fanaovana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/20/122717/
 The Arab Network for Kurdish Rights: http://www.kurdishrights.org/
 lahatsora-panokafan-dry zareo: http://www.kurdishrights.org/2007/05/13/introducing-kurdish-rights/
 mpikatroka Kiorda fanta-daza, Orhan Dogan: http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2007/6/turkeykurdistan1267.htm
 vaovao tamin'ny fandevenana: http://hevallo.blogspot.com/2007/06/pictures-from-orhan-dogan-funeral.html